Imihlahlandlela - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuvakasha (Ikhasi 2)
Amadolobha angasogwini ashibhile ukuhlala
Uma ufuna amadolobha ashibhile asogwini ukuze uhlale eSpain, sizokutshela ukuthi kukhona amahle kakhulu. Zithole bese ukhetha eyodwa yazo.
Amadolobha amahle kakhulu eCadiz
Amadolobha amahle kakhulu eCádiz ahlukaniswe phakathi kogu nangaphakathi. Kodwa labo baseSierra de Grazalema bayagqama. Alinge ukuhlangana nabo.
Amadolobha asogwini lwaseMalaga
Amadolobhana asogwini lwaseMalaga akunikeza amabhishi amahle nezikhumbuzo ezinhle ezinomlando omningi. Bazi futhi ujabulele.
Amadolobhana amahle kakhulu eCatalonia
Amadolobhana amahle kakhulu eCatalonia atholakala ogwini oluhle nasezindaweni ezinhle zangaphakathi nezwe. Alinge ukuhlangana nabo.
Amadolobha abandayo kakhulu eSpain
Amadolobha abandayo kakhulu eSpain atholakala ikakhulukazi ethafeni laseCastilian, e-Aragon nasempumalanga yeCatalonia. Alinge ukuhlangana nabo.
Izindawo eziyingozi kakhulu emhlabeni
Umhlaba uyindawo engenabulungiswa, bayanda abantu abampofu nokuthi ubumpofu buletha ubugebengu. Namuhla impilo yasemadolobheni amakhulu isiphenduke Wonke amadolobha emhlabeni anezindawo eziyingozi lapho kungafanele ukuya khona, imini nobusuku. Nazi ezinye zazo.
Amadolobha amancane kakhulu eSpain
Amadolobha amancane kakhulu eSpain aqanjwe ngokomlando, hhayi izakhamuzi. Lena indaba kaFrías noma uRedes. Alinge ukuhlangana nabo.
Ama-cheeses ama-French adume kakhulu
I-France ifana noshizi. Isifunda ngasinye sezwe sinoshizi noma ushizi othile, futhi kukhona cishe oshizi abangaba ngu-240 abangatholakala ngokujwayelekile Thola uhlobo olumangalisayo nolumnandi loshizi odumile waseFrance: Roquefort, Brie, Reblochon nabanye abaningi...
Izinto ongazenza e- Firgas de Gran Canaria
Yini ongayibona eFirgas, eGran Canaria? I-Villa del Agua ebizwa ngokuthi inezikhumbuzo ezinhle kanye nemvelo emangalisayo. Alinge ukumhlangabeza.
Amazwe avakashelwa kakhulu eYurophu
I-Europe iyisifunda somhlaba esivakashelwa kakhulu izivakashi. Kunesikhathi lapho amanye amazwe akhona amahle kakhulu ayengemva kwe-Iron Curtain Funda ngezwe elivakashelwa kakhulu e-Europe, adume kakhulu phakathi kwabahambi.
Amadolobha amahle aseMalaga
Phakathi kwamadolobha amahle aseMalaga kukhona iRonda, iFrigiliana, i-Antequera noma i-Archidona. Alinge ukubavakashela futhi ujabulele ubuhle babo
Amadolobhana amahle kakhulu eGranada
Amadolobha amahle kakhulu eGranada akuvumela ukuthi ujabulele ulwandle nezintaba, namabhishi amahle kanye nezindawo ezinhle. Alinge ukuhlangana nabo
Amabhuloho adumile aseRoma afana ne-Mérida noma i-Aelius abonisa ubuchwepheshe bonjiniyela eRoma yasendulo. Thola okuhle kakhulu
Yini ongayibona eJaén. Idolobha lase-Andalusian linesakhiwo esimangalisayo esiyisikhumbuzo, indawo yemvelo efana nephupho kanye ne-gastronomy enhle
Yini ongayibona e-Soria nasezindaweni ezizungezile? Idolobha laseCastilian linefa elikhulu eliyisikhumbuzo kanye nemvelo enelungelo. Alinge ukumazi.
Izinto ongazenza e- Sagunto Sithola idolobha elingokomlando laseLevantine elinezikhumbuzo zalo nendawo engokwemvelo. Qhubeka futhi uyivakashele.
Emafilimini amaningi e-United States sibona izingwadule ezinababulali abalandelanayo, ama-cowboy, abathengisi bezidakamizwa noma abantu abane-adventure. Izingwadule ze Hlangana nezingwadule ezine ezinkulu zase-United States, ama-cacti, ama-coyotes, isihlabathi, izihlahla, ukushisa okukhulu ngisho neqhwa.
Amadolobha amahle Omphakathi waseValencian
Amadolobha amahle eMphakathini waseValencian afana nePeñíscola, iMorella noma iGuadalest akulindile. Alinge ukungena ahlangane nabo.
Amadolobhana amahle kakhulu eHuelva ahlanganisa izindawo ezinhle kakhulu zamafa ezibabazekayo. Dare ukubazi manje.
Faka futhi uthole izingwadule ezinhle kunazo zonke e-Afrika: kusukela eSahara kuya endaweni eseduze neKilimanjaro.
Amadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni
Amadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni atholakala e-Asia, e-Oceania, eYurophu naseNyakatho Melika. ITokyo neSingapore bagqamile phakathi kwazo
IMount Everest iyintaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni, kepha akuyona yodwa. Yazi ukuthi yiziphi ezinye izintaba eziyisishiyagalolunye eziphakeme kunazo zonke emhlabeni.
Ungahamba kuphi ngoMeyi: izindawo ezi-10 ezihamba phambili ezibandakanya izindawo ezinhle zemvelo, izikhumbuzo ezihlukile nemikhosi ejwayelekile.
Kunamadolobha amaningi aseshiyiwe emhlabeni abekade engamadolobha achumayo. Siphakamisa umhlahlandlela kubo.
ISan Miguel de Escalada ingesinye sezimangaliso zeSpanish pre-Romanesque. Ungayivakashela kumasipala waseGradefes, esifundazweni saseLeón.
Yeka iziqhingi ezinhle ezikhona emhlabeni! Ikakhulukazi eSouth Pacific, umhlaba wezindaba eziningi ze ...
Umhlaba uhlukaniswe izifunda ezindawo futhi esinye sazo yi-Oceania. Lesi sifunda sanda kuwo womabili ama-hemispheres ...
Indlela yaseFrance yeSantiago
ICamino Frances de Santiago ikuvumela ukuthi uvakashele amadolobha amahle njenge-Estella, Nájera, Carrión de los Condes noma i-Astorga.
Uyazithanda izingwadule? Kuningi kuwo wonke amazwekazi nakwenye ebaluleke kakhulu eNyakatho Melika ...
IFrance inezindawo eziningi ezinhle futhi akudingeki uhlale neParis kuphela. Isibonelo, elinye idolobha elinomlando omningi ...
Uma uzibuza ukuthi wenzeni eSoria, sizokutshela ukuthi inamagugu omlando wobuciko avelele nokudla okumnandi.
Izinhlokodolobha zihlala ziyimagnethi yezivakashi, kepha uma ufuna ukwazi izwe kabanzi, kungcono ukubaleka ...
Vakashela iLago di Como
Uma kukhona indawo enhle yamachibi e-Italy, leyo yiLago di Como.Lapha okuncane… kuhlanganisiwe.
Uhambo oluya eMachu Picchu
Enye yezindawo ezinomlingo kakhulu emhlabeni, lapho ukuxhumana phakathi kwethu nemvelo kutholakala kalula ...
Kuhle nezintelezi zayo
Sibhekene nezikhathi ezinzima kakhulu kepha amakhaza asevele asishiya, izinsuku ezifudumele sezisondele futhi ...
Yonke imizi yase-Italy inezikhumbuzo ezizokuhlaba umxhwele. Kodwa phakathi kwabo, iRoma, iVatican City, iMilan, iVenice neFlorence zigqamile.
Vakashela iMount Olympus
Enye yezintaba ezidume kakhulu emhlabeni yiMount Olympus, intaba ethandwa kakhulu eGrisi kanye ne ...
Ngabe uzizwa uthanda ukuhamba wedwa? Sikukhombisa amadolobha amahlanu okuyindawo enhle ongayijabulela noma ngabe awuphelezelwa.
IMogarraz, indawo eSalamanca
Namuhla sihlala eSpain sazi elinye lamadolobha alo amaningi amahle: iMogarraz. Mncane, kufana nokuthi kufihlwe ...
ITahiti isiqhingi saseFrance esifana nepharadesi. Kukude, kuyingqayizivele, kuyajabulisa, kuyabiza futhi kuyabiza, kepha-ke ...
ICornwall, umcebo eNgilandi
I-England ingumnikazi wamathafa amahle, amahle, wamakhadi eposi, awukholwa ngempela ukuthi luhlaza okwezindawo zasemaphandleni, ...
Vakashela iCabo de Palos
I-cape yindawo yomhlaba eqhubekela olwandle futhi ethonya amagagasi futhi ...
Garachico, usizi kanye nezokuvakasha
ITenerife ingesinye seziQhingi zaseCanary, esikhulu kunazo zonke futhi esinabantu abaningi. Lapha, mayelana ...
Isigodi saseCarranza, imvelo namasiko
ISpain izwe eliheha kakhulu ukuvakashelwa. Ikhona ngalinye linelalo kodwa namhlanje elinye le ...
Spain ligcwele izinqaba, kuba ipharadesi bonke abalandeli Ephakathi noma fantasy medieval….
IBuckingham Palace, ukuvakashelwa kwasebukhosini eLondon
ILondon inezinto eziningi ezihehayo ngoba idolobha elinomlando futhi elinabantu abaningi, kepha ngaphandle kokungabaza ukuthi elakho ...
I-Auschwitz, ukwethuka komlando
Esinye sezifundo iMpi Yesibili Yomhlaba esisishiyele zona sihlobene nokuthi wethusa kanjani ...
Hamba nge-Orbaneja del Castillo
Izindlela zokuphunyuka emaphandleni zisemfashinini futhi ziyindlela enhle yokuphuma edolobheni, uphumule, ...
Vakashela isigodlo saseVersailles
Ngabe uya eFrance kule ntwasahlobo futhi ufuna ukuvakashela isigodlo esihle saseVersailles? Ngeke uzisole,…
Ukuhamba ngeCentral Park
Enye yezindawo eziyizimpawu eNew York yiCentral Park, ipaki eliphakathi elaziwa umhlaba wonke ngenxa yefilimu nethelevishini. Futhi kungani uya eNew York? Ungalokothi uphuthelwe ukuhamba ngeCentral Park emnandi!
Ezokuvakasha eHlathini Elimnyama
Igama elithi «Ihlathi Elimnyama» libhekisela kudizethi omnandi noma endaweni enhle kakhulu eYurophu….
ISpain inezindawo eziningi ezingakholeki nezinkambo ezinhle zokwenza ngezinsuku ezimbalwa zokuphumula. Olunye lwalezi hambo yi ...
ILondon Eye, kumele eLondon
Amadolobha amaningi anokuheha okuhle, acatshangelwe, aklanywa futhi akhiwe ngombono wabavakashi. Isibonelo yiLondon ...
Intaba ephakeme kunazo zonke eYurophu
Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi intaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni yi-Everest ... kepha uyazi ukuthi yini ...
Izindawo zokugeza ezishisayo zaseBudapest
IBudapest iyinhloko-dolobha yaseHungary, idolobha elidala kakhulu futhi isikhathi eside idolobha elidume nge ...
ISpain inezindawo ezingakholeki futhi uma uthanda imvelo nezokuvakasha ngaphandle ungaya esifundazweni saseGerona, eCatalonia, ubusika buyeza ukuze ukwazi ukuhlela uhambo lokushushuluza. Uyasazi isiGodi saseNuria nesiteshi saso? Kupholile, kuhle futhi kujwayelekile.
Emaphakathi Mpumalanga. Lesi sifunda somhlaba besisematheni isikhathi esingaphansi kweminyaka engamashumi amahlanu. Ngokwengxenye ngoba iyindawo eseMpumalanga Ephakathi, inamadolobha amadala kakhulu futhi icebile ngomlando namasiko. Akuzona njalo eziphephe kakhulu kepha uma uthanda i-adventure ...
Uma uthanda ukwakha kunezakhiwo eziningi nezakhiwo ezifanele ukwaziwa mathupha. IPortugal, ngokwesibonelo, inezakhiwo eziningi. Ingabe uya eLisbon? Ngemuva kwalokho ungakhohlwa ukuvakashela iTorre de Belém enhle. Inhle ngaphandle nangaphakathi futhi ithala layo ukubukwa kunakho konke.
ILatin America iyimbombo yezinhlanga futhi izinkulungwane zeminyaka yempucuko namasiko ashiye ifa elibalulekile. Mhlawumbe, kumuntu ongeyena owaseMelika, awuyi e-Ecuador? Yizwe elihle futhi linamasiko amaningi. Kuthiwani ngokwazi ezinye zazo ngaphambi kokuvakashela? isimilo, imvunulo ejwayelekile, ukudla ...
Uma ungayazi iNingizimu Melika kungenzeka ukuthi awazi ukuthi iBolivia iyizwe eliqukethe izinto eziningi ngakho-ke akunakwenzeka ukusho ukuthi amasiko ayo futhi. Ngabe uya eBolivia? Yeka indawo enhle! Inamasiko amaningi amasiko, umlando omningi nokudla okuningi okumnandi! Qiniseka ukuthi uzama konke okuncane.
Imephu ye-Game of Thrones
Ukucabanga kwangeNkathi Ephakathi uhlobo olukhulu olungaba nendaba efanayo kusuka kumlingo nakumbango wezepolitiki, ngokuthandana nobuqhawe futhi Uyayithanda i-Game of Thrones? E-Ireland naseSpain unezilungiselelo eziningi zemvelo lapho iziqephu eziningana zochungechunge ziqoshwe khona.
Thola iLondon ngokuhamba kuJack the Ripper noSherlock Holmes. Ukufa, izisulu, ababulali, izitha, izingobe kuzo zonke izitaladi ezindala zenhlokodolobha yaseNgilandi.
Amaholide eFiji, amaholide epharadesi
Uyawathanda amabhishi, amakhorali nemvelo? Bese uthenge ithikithi lokuya eFiji futhi ujabulele lezi ziqhingi ezinhle nezithokomele e-Oceania.
Izindawo zokudlela ezi-5 ezingajwayelekile eTokyo
Ukudla eTokyo kuhlala kuyiphathi kepha kulezi zindawo ezi-5 kubuye kube yinqaba kakhulu emhlabeni: ama-vampire, amaphupho we-psychedelic, ama-ninjas ...
5 imisebenzi exakile okufanele yenziwe eBeijing
Isikhathi esithile manje, iBeijing isibe ngenye yezindawo ezinhle e-Asia ukukwenza ...
Ukuvakasha kwe-Ghostbusters eNew York
Uma uya eNew York futhi uyawathanda ama-movie kuningi okufanele kwenziwe, kepha uma ungumlandeli weThe Ghostbusters ungabona izindawo zawo. Thatha uhambo lwe-Ghostbusters!
INew Caledonia, ikona elincane lomhlaba
Ingabe uyathanda ukuchitha ihlobo epharadesi elikude? Bese uzama iNew Caledonia, isiqhingi esimnandi esinamathafa ayinkulungwane: amabhishi, imihlume, amawa, amahlathi
Uhambo oluyinqaba lokubuka indawo eStockholm
Onke amadolobha agcina izindawo ezingajwayelekile ngakho-ke uma ungafuni ukwenza ngokufana nabo bonke abavakashi, bhala phansi lezi zivakashi ezingajwayelekile eStockholm.
I-Airbus A380, enkulu kunazo zonke
Uyazi ukuthi iyiphi indiza enkulu kakhulu yezentengiselwano emhlabeni? Yi-Airbus A380, indiza enezitezi ezimbili enebha neshawa. Yazi!
IVanuatu, ipharadesi elikude
Eyaziwa kancane kuneTahiti noma iBora Bora kodwa nje iyinhle iVanuatu, eSouth Pacific. Lezi ziqhingi zinamabhishi, izintaba-mlilo, amahlathi ngisho namazimuzimu.
Uhambo oluvela eKyoto
Indawo yaseKyoto iyamangalisa ngakho-ke qiniseka ukuyivakashela: i-Arashiyama, iKokedera, iKatsura kanye nezinkulungwane zamathambo abomvu kaFushimi Inari.
Ungaphuza kuphi i-vermouth eMadrid njengekati langempela?
Noma ngubani ohlala eMadrid isikhashana uzobe ekubonile ukuphuza i-vermouth noma i-vermouth e ...
Jabulela isonto eJamaica
IJamaica ifana namabhishi ne-reggae kepha inikela ngokuningi kakhulu. Isonto eJamaica yilona elihamba phambili: amabhishi, izimpophoma, ihlathi, izintaba kanye ne-rum eningi.
Amaholide anelanga eBarbados
Ngabe ucabanga ngeCaribbean? Yebo, iBarbados yindawo enhle: amabhishi amahle, ulwandle oluphuphayo, umlando wamakholoni nokuningi, i-rum eningi.
Ungathanda ukuthatha uhambo oluya eGibraltar? Ngezinsuku ezimbalwa kwanele ukukhuphuka uphinde wehle edwaleni, udle, uhambe futhi ujabulele.
Ukukhathazeka okukhulu nganoma yisiphi isihambi kudlula imikhawulo yemithwalo ebekwe yizindiza. Uma kukhulunywa nge…
Impilo yasebusuku eDubai, ukuzijabulisa kanjani
Ngabe uya eDubai? Yebo, kungaphezu kogwadule nokuthenga, inempilo enhle yasebusuku! Pakisha izingubo ukuze uphume ngoba uzoba nesikhathi esimnandi.
Ongakudla ehlobo eTokyo
Uma uya eTokyo ehlobo, qiniseka ukuthi uzama izitsha zasehlobo ezinhle kakhulu enhlokodolobha yaseJapan. Uzomangala ukuthi zimnandi kanjani!
Ihlobo eParis, amachibi angcono kakhulu okupholisa
Ngabe uya eParis ehlobo? Ungakhathazeki, kunamachibi amaningi okupholisa ngakho qamba amanye amahle kakhulu.
Yini okufanele uyenze izinsuku ezintathu eHavana
Ngabe uya eCuba? Musa ukugxumela ngqo emabhishi alo. Chitha izinsuku ezi-3 eHavana bese uthola umlando, amasiko namagugu alo. Ngeke uyeke ukumangala!
Ukubukwa okungu-5 okuhle kwepanoramic kweParis
Uma uya eParis, ungayeki ukuhamba ezitaladini zayo nokuqwala izakhiwo zayo ezide kakhulu. Yazi amaphuzu ama-panoramic ayi-5 amahle kakhulu eParis!
Izindawo ezi-10 ezinhle kakhulu emhlabeni ngokusho kweLonely Planet
Thola ukuthi yiziphi izindawo ezinhle kakhulu emhlabeni ongahamba ngazo ngokomhlahlandlela weLonely Planet. Izindawo ezimangalisayo okufanele zivakashelwe okungenani kanye.
Hlangana neBudda Enkulu yaseKamakura eJapan
Ingabe useTokyo? Thatha isitimela bese uzobona uBuddha Omkhulu waseKamakura, isithombe esikhulu edolobheni lasendulo futhi elimangalisayo.
Imisebenzi engu-5 yezivakashi e-Auckland
I-Auckland iyindawo enhle eNew Zealand. Idolobha elihle, uma likhona, lisinikeza imisebenzi eminingi yangaphandle. Zitholele!
IBolvia, iparele elifihlekile laseNingizimu Melika
Thola ukuthi iBolivia ikuphatheleni: amanxiwa asendulo, amadolobha amakoloni, amaflethi kasawoti amnandi, abantu abakhulu. Izimangaliso eziningi!
Amaholide eHuanchaco, ogwini lwasePeru
Uma uthanda ukuntweza olwandle, iPeru namasiko asendulo lapho iHuanchaco yindawo ongayigeja khona. I-spa enabantu abavela kuwo wonke umhlaba.
Indoda Eshisayo, umkhosi ophakathi kobuciko nokufihla
Ubuciko, umculo we-elekthronikhi, ubudala obusha, uMad Max, umjaho wamahhashi, konke lokho kungumkhosi weBurning Man e-United States. Uyamazi?
Uhambo olusha lweSuriname
Uthanda ukuzidela? Ngemuva kwalokho ungazi iSuriname, izwe elincane laseMelika elinokuhlukahluka okumnandi okuphilayo.
Ngo-2017 kugujwa iminyaka eyikhulu yeRussian Revolution futhi ungahlela uhambo. Ngakho-ke, bhala phansi lo mhlahlandlela walokho ongakuphuthelwa eMoscow
Ukuvakasha okushibhile eReykjavík, Iceland
Ucabanga ukuthi i-Iceland iyindawo ebizayo? Ungahlala ungonga ngakho-ke ngikucebisa ngohambo olushibhile oluya eReykjavík, inhloko-dolobha yalo.
Uhambela e-Australia? Ungahlali nje neSydney Melbourne, zama iCanberra! Phela yinhlokodolobha.
Izinkambo ezine ezinconyiwe okufanele zenziwe eStockholm
Uma uya eStockholm qiniseka ukwenza noma yikuphi kwalolu hambo lwedolobha oluhle kakhulu: kukhona izipoki, izincwadi ezidumile, uphahla oluphezulu nokuhamba ngesikebhe.
I-Saint Lucia, ihlobo unyaka wonke
Ngabe ufuna indawo lapho kusehlobo cishe unyaka wonke? Ngemuva kwalokho hamba uye eCaribbean futhi ujabulele isiqhingi esihle saseSanta Lucia. Ngeke uzisole!
IBarranquilla, idolobha lomkhosi omnandi kakhulu eColombia
Ohambweni oludabula iColombia, ungakhohlwa ukuvakashela iBarranquilla, idolobha lomkhosi omnandi kakhulu eLatin America.
Bhala phansi lo mhlahlandlela ukuze ujabulele izinsuku ezine eDubai. Bayokhumbuleka!
Jabulela iVienna ngezinsuku ezintathu
Ingabe unezinsuku ezintathu eVienna? Bhala phansi konke ongakwenza futhi ukujabulele kulo muzi wobukhosi.
5 Amagugu Angaphansi Kwamanzi Asakazeka Emhlabeni Wonke
Ukujula kolwandle kugcina ubucwebe beqiniso bugcinelwe labo abazama ukungena emanzini alo ukuze bazithole….
Jabulela ukuvakasha okuhle kwamadolobha anomlando kakhulu futhi amahle kakhulu ogwini olusempumalanga yeNyakatho Melika, e-United States naseCanada.
Ugu olusempumalanga yeNyakatho Melika lunamadolobha amakhulu aseCanada nase-United States. Into engcono kakhulu ukuhlanganisa bonke ohambweni olungasoze lwalibaleka, ungalokotha?
ISpain, isethi ye-movie
Uchungechunge lwethelevishini, olusemfashinini ezikhathini zakamuva, nakwibhayisikobho lube yisikhangiso esihle kunazo zonke ...
Konke odinga ukukwazi ukuchitha izinsuku ezimbalwa e-Okinawa, eJapan eshisayo.
EParis ehlobo, okufanele ukwenze
Ihlobo alikapheli, ngakho-ke bhala phansi lawa macebiso ukuze ujabulele ihlobo eParis: umculo, itiyetha, amabhishi, i-cinema.
Ukuvakashela e-Odaiba, into entsha kunazo zonke eTokyo
Ngabe useTokyo futhi uyazibuza ukuthi uzovakashela i-Odaiba noma cha? Unganqikazi! Isiqhingi, uhambo, konke, kuyamangalisa.
Uhambo oluhamba phambili oluvela eNice
Uma uvakashela iNice kuleli hlobo, ungaphuthelwa amadolobhana amahle e-French Riviera akhona. Zindala futhi zinhle!
Izindawo ezishibhile zasolwandle eSpain
Ukuthola izindawo ezishibhile zasolwandle eSpain kulula. Sikutshela ngezindawo ezinhlanu ezinhle ezindaweni ezisogwini lwaseSpain.
Umhlahlandlela wokujabulela iNew York ehlobo
Uma uya eNew York ehlobo kunezinto eziningi ongazibona futhi uzenze ngaphandle: amapaki, amabhishi, ukuhamba, ukuhamba ngezinyawo, amakhonsathi namaqembu.
Umhlahlandlela walokho ongeke ukugeje eTokyo, idolobha elihle kunawo wonke e-Asia!
Ukuhamba njalo kuyintokozo. Yazi izindawo ezintsha, amasiko, ama-gastronomies ... Kepha, ungaqala kuphi ukuhlela lokho kuphunyuka nge ...
Iholide lami eKyoto, liyisiqondiso sokujabulela idolobha lasendulo
Awungeke uye eJapan ungavakasheli iKyoto: indala, imnandi, yinhle futhi ayiyeki ukuthembela kuwe.
Izimangaliso zemvelo eziyi-7 zomhlaba
Yazi izimangaliso zemvelo eziyi-7 zomhlaba, ezikhethwe yivoti ethandwayo, ezinezindawo ezinhle okumelwe zibonwe.
Indlela yesiPutukezi eya eSantiago
Indlela yasePutukezi yeCamino de Santiago ingeyesibili ukwenziwa ngemuva kwamaFrance, futhi ingxenye yeTui, eningizimu yeGalicia.
Yini ongayibona eziqhingini zaseHawaii
Lapho sicabanga ngeHawaii into yokuqala efika engqondweni amabhishi amahle esihlabathi esimhlophe futhi ...
IPraslin, iMahe neLa Digue yizindawo ezintathu ezaziwa kakhulu ngepharadesi emhlabeni: iziQhingi zaseSeychelles.
Umhlahlandlela wokuvakashela i-Fallas of Valencia: Amanye amathiphu
Uma kungekudala sizolithokozela iSonto Elingcwele, noma ngabe sisheshe sizokwazi ukujabulela i-Fallas of Valencia, ...
Izindawo ezi-10 ezihamba phambili zango-2016 ngokusho kweLonely Planet (II)
Uma ngolunye usuku sikutshele izindawo ezinhlanu ezihamba phambili zango-2016 ngokusho kweLonely Planet, namuhla yisikhathi sakho ...
Izindawo ezi-10 ezihamba phambili zango-2016 ngokusho kweLonely Planet (I)
Impela nonke niyayazi iLonely Planet, engomunye wabashicileli abahamba phambili kunabo bonke emhlabeni, enabaqondisi ...
Umhlahlandlela wokuzwa i-Carnival eGalicia
Yebo, sesivele sazi ukuthi uma sikhuluma ngeCarnival imvamisa sicabanga ngalabo abaseRio de Janeiro, nangaphansi ...
Uyazi izigodi eziyishumi ezibaluleke kakhulu emhlabeni? Ungaphuthelwa yilezi zindawo ezimangazayo nezimfihlo abazifihlayo kulabo abazivakashelayo.
Amabhishi ama-3 amahle kakhulu e-Andalusia
Kunamabhishi amaningi e-Andalusia adumile futhi amahle, futhi sikukhombisa amathathu amahle kakhulu, okungafanele uwaphuthelwe uma uhamba eningizimu.
I-Erechtheion, ithempeli elidumile e-Acropolis yase-Athene
I-Erechtheion yigama lethempeli lasendulo lamaGrikhi elime ohlangothini olusenyakatho lwe-Acropolis yase-Athene.
I-Romantic Road, uhambo olubalulekile oluseningizimu yeJalimane
I-Romantic Road (iRomantische Strasse) iyisifunda sabavakashi esidume kunazo zonke futhi esidala kunazo zonke eJalimane.
INeuschwanstein castle isendaweni ephakeme ebheke ePöllat Gorge.
I-Porquerolles, isiphephelo semvelo esihle se-French Riviera
I-Porquerolles iyisiqhingi esikhulu kunazo zonke futhi esentshonalanga kakhulu yeziqhingi zaseHyeres.
Izindlela zokuhamba zokuya eThe Hamptons
IHamptons iyindawo yokuthula yokuphuma eManhattan ephithizelayo. Kunezindlela eziningi zokufika kule ndawo okuyimfashini kakhulu kunakuqala
Imininingwane yokuthi kungenzeka uye eNew York ngesikebhe. Kukhona ukukhuluma ngomkhumbi weQueen Mary 2 kanye nenketho yokuhamba ngomkhumbi womthengisi.
Imibono yothando yedolobha laseLisbon (I)
Phakathi kwamakhona athandana kakhulu eLisbon, imibono yayo edumile ithatha indawo enhle.
IGreen Horseshoe: umgudu wepaki odlula eZagreb
Ukuhlelwa kwendawo yedolobha laseZagreb kudonswa yisigodi esime njenge-'U 'esakhiwe ngamagquma aso amabili amakhulu.
I-Keeway Superlight 200: Isithuthuthu Esifanele SamaShayina sohambo lwezithuthuthu
Ukuhamba ngesithuthuthu kungenye yezinjabulo ezinhle kakhulu kulabo abathanda i-adrenaline.
Izindiza Ezinkulu zase-Oceania
Namuhla sizohlangana nezindiza ezithile ezibalulekile e-Oceania. Ake siqale ngokusho iQantas, inkampani yezindiza ebaluleke kakhulu futhi enomlando ...
I-La Manga del Mar Menor
Indawo yaseLa Manga del Mar Menor
Idolobha laseLima lixhumene nezwe lonke ngokusebenzisa iCentral Highway kanye nePan-American Highway. Kusukela…
Amabhishi ePernambuco, Fernando de Noronha (II)
Ukuqhubeka namabhishi amahle aseFernando de Noronha: IPlaya del Boldró Ingenye yezindawo ezivame kakhulu futhi, ine ...
Isiqhingi Somuntu Esingaziwa
Kutholakala oLwandle lwase-Ireland, phakathi kweNgilandi, iScotland, iWales ne-Ireland, kuyindawo ethembele eBritish Crown, ...
Ungazungeza kanjani i-Istanbul
I-Istanbul ingelinye lamadolobha anabantu abaningi emhlabeni, ngakho-ke kuyisiphithiphithi esihlaba umxhwele. Ngaphezu kwalokho, igezwa ...